Acer ConceptD: ny kahie vaovao ho an'ny matihanina | Vaovao momba ny gadget
Manohy ny vaovao avy amin'ny Acer izahay amin'ny famelabelarana azy amin'ny IFA 2019. Mamela anay ny orinasa ireo kahie vaovao ho an'ny matihanina, izay ny laharana ConceptD. Ity faritra vaovao ity dia natomboka indrindra ho an'ireo mpamorona atiny, satria ny fitaovana rehetra dia omena miaraka amin'ireo maodely ireo. Modely matanjaka, feno fonosana hanampy anao hahavita ny asa.
Ity faritra ity dia natao hanolorana fampisehoana farany ambony, ankoatry ny famelana ny fampiasana maharitra tsy an-kijanona mandritra ny ora maro. Tsy misy isalasalana fa aseho ho faritra tonga lafatra ho an'ny matihanina izy io. Acer dia mamela antsika amin'ny solosaina finday maro sy mpanara-maso ao anatin'io laharana ConceptD io.
Ny orinasa dia mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny fanatanterahana tsara amin'ny asa toy ny zava-misy virtoaly, faharanitan-tsaina artifisialy ary fanadihadiana lehibe tahirin-kevitra. Noho io antony io dia aseho ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ity sehatra ity ny laharana iray manontolo, miaraka amina maodely maodely vaovao, miaraka amin'ny ConceptD 9 Pro izay mitarika azy amin'ny alàlan'ny laptop voalohany.
Acer Swift 7, solosaina finday manify mahafinaritra amin'ny vidiny tsy misy fanajana [Famerenana]
1 ConceptD 9 Pro: Ny kintan'ny tandavan
2 ConceptD 7 Pro: Hery amin'ny endrika maivana
3 ConceptD 5 Pro: habe roa azo ampiasaina
4 ConceptD 3 Pro: Mety tsara ho an'ny mpamorona atiny
5 ConceptD 5 sy ConceptD 3: Modely nohavaozina
HevitraD 9 Pro: Ny kintan'ny tandavan-tany
Ny maodelin-kintana amin'ity andiany ity avy amin'ny Acer dia ny ConceptD 9. Pro. Hitanay ny tenanay miaraka amin'ny solosaina finday vaovao sy tsara ho an'ny mpamorona, noho ny fisian'ilay hingel Ezel Aero namboarina tamin'ny CNC, noforonin'ny marika ihany. Tsy maintsy ampiantsika fa miaraka a Efijery habe 17,3-inch miaraka amin'ny famahana 4K (3840 x 2160), izay afaka hivadika, hanitatra ary hipetraka amin'ny fotoana rehetra. Ankoatr'izay, ity fampisehoana ity dia voamarina PANTONE ary manarona ny 100% ny gamut miloko Adobe RGB miaraka amin'ny fahamendrehana loko Delta E <1 tsy mbola nisy toy izany.
Ity laptop ConceptD 9 Pro ity dia misy mpikirakira Intel Core i9 hatramin'ny faha-9 ary sary hatramin'ny NVIDIA Quadro RTX 5000. Izy io dia sary namboarina ho an'ny fianarana lalina ny AI na ny simulateur injeniera ary ny studio fanaovana sary mihetsika lehibe. Tonga lafatra ho an'ireo mpampiasa mila hery sy mifanentana. Ny kahie dia miaraka amina Stylus Wacom EMR izay mifamatotra mora aminy miaraka amin'ny andriamby.
ConceptD 7 Pro: Hery amin'ny endrika maivana
Ny maodely faharoa amin'ity andiany ity avy amin'ny Acer dia ny ConceptD 7. Pro dia solosaina finday iray izay aseho ho maodely matanjaka sy malefaka, nefa maivana miaraka amin'izay. Mety indrindra raha ny hitondra azy miaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra. Mirefy 17,9mm ny lanjany ary milanja 2.1kg.
Ity solosaina finday ity dia manana efijery 15,6-inch, 4.000-pixel. Natao ho an'ny fampisehoana mahery vaika eny an-dalana, izy io dia ao anatin'ny programa RTX Studio ihany koa. Izy io dia ampiasain'ny processeur Intel Core i7 andiany faha-9 ary misy NVIDIA Quadro RTX 5000 GPU. Ho fanampin'izany, ny ConceptD Palette dia manolotra mpizara mpampiasa intuitive izay manitsy haingana ny piraofilina miloko tiany ary manara-maso ny fanaraha-maso ny rafitra.
ConceptD 5 Pro: habe roa azo ampiasaina
Ity solosaina finday ity dia ao anatin'ny programa RTX Studio ihany koa, raha nohamafisin'i Acer mihitsy tamin'ny fampisehoana azy. Izy io dia aseho ho safidy mety indrindra rehefa manao fampisehoana famolavolana CAD, fampihetseham-po ary asa fanahafana ny sarotra. Izany no antony maodely tsara ho an'ny mpanao mari-trano, mpanentana 3D, mpamokatra vokatra manokana na studio famoronana.
Ny ConceptD 5 Pro dia natomboka tamin'ny habe roa, toy ny manasongadina fampisehoana IPSi 15,6-inch na 17,3-inch, samy manana ny vahaolana 4K UHD. Izy io koa dia mampiasa processeur Intel Core i7 hatramin'ny faha-9 ary sary Quadro RTX 3000. Namboarina tamina chassis metaly premium izay manome faharetana. Ny fampisehoana PANTONE-Validated Certified dia natokana ho an'ny mpanakanto, misy gamut miloko malalaka izay mifanaraka amin'ny 100% ny habaka loko RGB an'ny Adobe ho an'ny famerenana ny loko marina.
ConceptD 3 Pro: Mety tsara ho an'ny mpamorona atiny
Ity solosaina finday ity Izy io angamba no mora azo indrindra ao anatin'io faritra io, araka ny nolazain'i Acer tamin'ny famelabelarany. Modely mety tsara ho an'ny mpaka sary, mpianatra mpamorona indostrialy, mpamorona sary na mpamorona endrika anatiny. Ho an'ny mpandefa sehatra toa an'i YouTube na Twitch dia mety ho modely tsara amin'io lafiny io. Raha fintinina, mety ho an'ny mpamorona atiny.
Raha ny momba azy manokana, ny nambaran'ny marika dia ny mampiasa processeur Intel Core i7 hatramin'ny faha-9 sy sary NVIDIA Quadro T1000. Misongadina ambonin'izany rehetra izany satria miasa mangina izy latsaky ny 40 dB. Natao ho fanamorana ny fampiasana azy io, ny mpampiasa dia afaka miditra amin'ny alàlan'ny mpamaky rantsantanana tafiditra amin'ny alàlan'ny Windows Hello mba hahazoana fidirana mora sy azo antoka kokoa amin'ny fotoana rehetra na amin'ny toerana hafa.
ConceptD 5 sy ConceptD 3: Modely nohavaozina
Acer manavao solosaina finday roa ao anatin'io faritra io, izay mahazo andian-dahatsoratra fanatsarana sy famaritana. Ny marika dia mamela antsika amin'ny solosaina finday vaovao ConceptD 5 sy ConceptD 3. Safidy roa ho an'ireo izay mitady safidy mahazatra kokoa ao anatin'io faritra io, saingy tsy mahafoy ny kalitaony.
Ny ConceptD 5 dia natomboka tamin'ny habe roa, Sarimihetsika 15 inch na 17 santimetatra. Ireo solosaina finday roa ireo dia mampiasa processeur Intel Core i7 hatramin'ny faha-9. Raha ny ConceptD 5 dia nohavaozina niaraka tamin'ny safidin'ny NVIDIA GeForce GTX 2060 GPU. Etsy ankilany, ny ConceptD 3 dia kahie kely sy kanto noho ny famaranana fotsy, ary koa ny fandidiana tsy misy tabataba mba hahafahan'ny mpampiasa mifantoka amin'ny volavolany. Amin'ny tranga misy azy dia mampiasa NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU izy, izay manome hery lehibe.
Farany, mamela anay mpanara-maso ao amin'ity sokajy ity ny orinasa. Ity no ConceptD CM2241W vaovao, izay fanaraha-maso biraon'ny birao tsara ho an'ny mpampiasa te-hanampy fampisehoana ivelany ny toeram-piasan'izy ireo. Noho izany dia mahazo efijery lehibe iray isika, izay manamora ny asantsika.
Ity bezel ity dia manana bezel manify, izay ahafahanao manararaotra tsara an'io eo alohany amin'ny fotoana rehetra. Ho fanampin'izay, miavaka amin'ny famolavolana loko tena tsara izy manohana ny 99% an'ny gamut an'ny loko RGB an'ny Adobe. Ka mety amin'ny mpamorona sy mpamorona atiny izany.
Ity elanelana ity no be indrindra nasehon'i Acer tao amin'ny IFA 2019. Mahita modely maro izahay, ny sasany amin'izy ireo aza misy dikanteny maromaro amin'ny habeny. Ireo rehetra ireo dia hatomboka amin'ireo volana farany amin'ny taona ireo, eo anelanelan'ny Oktobra sy Desambra. Na dia miovaova aza ny fahafaha-miaina arakaraka ny maodely. Ireo no daty famotsorana sy vidiny:
Ny ConceptD 9 Pro dia ho hita manomboka amin'ny volana novambra amin'ny vidiny 5.499 euro.
Ny ConceptD 7 Pro dia manomboka amin'ny volana novambra miaraka amin'ny vidiny 2.599 euro.
Ny ConceptD 3 dia ho hita manomboka amin'ny volana oktobra amin'ny vidiny 1.199 euro.
Ny Acer ConceptD 3 Pro dia ho hita manomboka amin'ny volana novambra amin'ny vidiny 1.499 euro.
Ny ConceptD 5 (17,3 ″) dia ho hita manomboka amin'ny volana novambra miaraka amin'ny vidiny 2.199 euro.
ConceptD 5 Pro (17,3 ″) dia ho hita manomboka amin'ny volana desambra amin'ny vidiny 2.599 euro.
Acer ConceptD 5 (15,6 ″) dia ho hita manomboka amin'ny volana septambra amin'ny vidiny 1.999 euro.
ConceptD 5 Pro (15,6 ″) dia ho hita manomboka amin'ny volana oktobra amin'ny vidiny 2.499 euro.
Ny monitor ConceptD CM2241W dia ho hita amin'ny volana oktobra amin'ny vidiny 469 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » solosaina » portable » ConceptD: karazana kahie matihanina an'ny Acer
Honor 20s ary Honor Play 3: eo afovoany vaovao an'ny marika